Gigi Hadid နှင့် သူတွဲခဲ့သောဘဲများ – FemaleWear.net
Gigi နဲ့ Zayn ပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက် သိပ်မကြာသေးခင်မှာပဲ Gigi ဟာ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ အီစီကလီလုပ်နေပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြားနေရပါတယ်။
အခုလက်ရှိ Gigi နဲ့ သတင်းထွက်နေခဲ့တဲ့သူကတော့ Formula one ချန်ပီယံတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Lewis Hamilton ပါတဲ့နော်။ Lewis က Gigi နဲ့အခုလိုသတင်းထွက်တယ်ဆိုတာ ပထမဆုံးအကြိမ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Zayn နဲ့မတွဲခင် ၂၀၁၅ လောက်မှာလည်း သူတို့နှစ်ယောက် date နေခဲ့ကြတယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ ဘယ်သူနဲ့ကြိုက်ပြီး ဘယ်သူနဲ့ ပြတ်ခဲ့ပြတ်ခဲ့ အမြဲကြိုဆိုနေတဲ့ ရင်ခွင်ကြီးတစ်ခုထင်ပါရဲ့လေ။
အသက် ၂၂ ပြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့ Gigi တစ်ယောက်ဟာ ရည်းစားတွေများခဲ့တယ်လို့လဲပြောလို့ရနိုင်လောက်ပါတယ်။ သူတွဲခဲ့သူတွေအများစုကတော့ အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းထဲကလူတွေဖြစ်တာကြောင့် သူ့နာမည်ပိုကျော်ကြားဖို့ အသုံးချခဲ့တာလားလို့လဲ ဝေဖန်သူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတွဲခဲ့တဲ့ Nick Jones နဲ့ Joe Jonas ဟာဆိုရင် ညီအစ်ကိုအရင်းကြီးတွေဖြစ်ပြီး အခုလက်ရှိသတင်းထွက်နေတဲ့ Lewis ဟာဆိုရင်တော့ Gigi ညီမ Bella Hadid နဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Kendall Jenner တို့ရဲ့ ရည်းစားဟောင်းကြီးပါ။ အဆန်းကြီးနော်… သူတို့များ ဘယ်လိုမျက်နှာတွေနဲ့ တွဲနေကြလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့ကိုမရ?
၂၀၁၃~၂၀၁၅ မှာတော့ အဆိုတော် Cody Simpson နဲ့ လက်တွဲခဲ့ကြဖူးပါသေးတယ်။ ကြားထဲမှာလဲ အတည်မပြုကြပဲ တွဲနေကြတာလိုလိုဆိုပြီး သတင်းအတင်းထွက်ခဲ့ဖူးတာတွေကတော့ Patrick Uretz, Daniel Sharman စတဲ့သူတွေပါ။
New York City, USA – May 2, 2016: Zayn Malik and Gigi Hadid
Gigi အနေနဲ့ အကြာဆုံးတွဲခဲ့တာကတော့ အားလုံးသိထားတဲ့ Zayn ဖြစ်ပြီး အရင်ဘဲတွေလိုပဲ ပြတ်ချည်ဆက်ချည်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝင်တွေလဲရှိခဲ့တော့ အပြီးတိုင်ပြတ်ဆဲသွားမလား?? ပြန်ဆက်ကြမှာလားဆိုတာကို စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။